Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonadii shacabka Oromia oo Karaar Qaatay & Xaalada oo Cakiran.
Kacdoonadii shacabka Oromia oo Karaar Qaatay & Xaalada oo Cakiran.
Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ee magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in ay dabarka goosteen kacdoonadii shacabka lagumaysto ee Oromia, sida uu wariyuhu sheegayo waxaa gabi ahaanba dhulka Oromia siwayn uga laba kacleeyay kacdoonadii shacabka ee socday mudada dheer.
Meelaha ugu daran ee kacdoonada shacabku ay gilgileen waxaa kamid ah koonfurta Gobolka Oromia halkaas oo sida lasheegayo ay kacdoon wadayaashu qabsadeen xabsi wayn oo lagu magacaabo Walage halkaas oo ay kasiidaayeen maxaabiis aad ubadan oo mudo si sharci daro ah halkaas ugu xidhnaa.
Sida uu wariyuhu sheegayo dagaal culus oo kacdoon wadayaasha iyo ilaaladii xabsiga Walage dhex maray ayaa keenay dhimashada 5 askari oo ciidanka Booliiska wayaanaha ah, kuwaas oo markii dambe lagu qasbay in lakala eryo.
Dhinaca kale dadka kacdoon wadayaasha ah oo sida daadkii usocda ayaa lasheegayaa in ay weerareen fadhiisimo ay ciidanka wayaanuhu kuleeyihiin koonfurta Gobolka Oromia, warka ayaa intaas kudaraya in israsaasayn shacabka iyo ciidamada wayaanaha dhex martay uu kudhaawacmay General udhashay qoomiyada Tigreega oo magiciisa aanaan wali helin.
Xaalada wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa umuuqata mid aan xal lahayn waxaana qaybo badan oo wadanka ah kajira kacdoona shacab oo maalinba maalinta xigta kasii daraya.